Charter flight brings 147 Hubei residents home from Singapore(1/9)
2020-02-07 11:37:41 Xinhua Editor :Cheng Zizhuo
Passengers of a charter flight wait for boarding at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
A crew member of a charter flight makes preparations at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
Crew members of a charter flight make preparations for passengers at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
Crew members of a charter flight take body temperature of a passenger before boarding at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
A staff member checks body temperature of charter flight passengers at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
A staff member takes body temperature of a girl at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)
A passenger of a charter flight waits for boarding at Singapore Changi Airport in Singapore, Feb. 5, 2020. China dispatched a charter flight Wednesday to fly 147 stranded Hubei residents home from Singapore following the novel coronavirus outbreak. (Xinhua/Then Chih Wey)